यस्ता व्यक्तिलाई पत्नी सुख मिल्दैन
25 May 2020 | सोमबार, १२ जेष्ठ, २०७७ | Edition : Nepal | UK | Australia
बिहीबार, २७ चैत, २०७६
एजेन्सी । पछिल्लो केहि समय यता विवाह लामो समयसम्म टिकाउनु निकै मुस्किल जस्तै भइसकेको छ धेरैलाई । पति र पत्नीबीचको सम्बन्धपनि त्यति धेरै गहिरो हुँदैन ।
भनिन्छ जीवनसाथी यदि राम्रो छ भने जीवन स्वर्ग बन्छ । तर यहि कुरा विग्रीयो भने जीवन नर्क बन्छ । त्यसैले जो कोहिको पनि यो जान्न जरुरी छ कि हाम्रो जीवनसाथी कस्तो हुन्छ रु र उसको व्यवहार कस्तो हुन्छ ?
तपाईको औला बताउन सक्छ कि तपाईको जीवनसाथी कस्तो हुन्छ रु समुन्द्र शास्त्रमा केहि कुरा उल्लेख गरिएको छ जीवनसाथी सँग जोडिएको । जसले भविष्यमा तपाईको जीवनसाथी कस्तो हुनेछ भन्ने जनाउँछ ।
समुन्द्र शास्त्रको अनुसार जुन मानिसको हातको औला नमिलेको मोटो र भद्दा हुन्छ , ती मानिसहरुलाई पत्नी सुख मिल्दैन । जीवनमा अभाव भइरहन्छ ।
शास्त्रमा यो पनि उल्लेख गरिएको छ कि जसको हातमा औला आर्कषक हुन्छ उनीहरुलाई पत्नीको भरपुर सहयोग मिल्छ । यस्ता मानिसहरु सुखी जीवन विताउन सफल हुन्छन् ।
समुन्द्र शास्त्रको अनुसार जुन पुरुषको हातका औला लामो र सीधा हुन्छ ती व्यक्तिको पत्नी काम गर्न निकै तेज हुन्छन् ।
त्यस्तै जुन व्यक्तिको औला चुच्चो र छोटो हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिका पत्नी अत्याधिक गुणवान र तेज हुन्छन् । यस्ता मानिसहरुको जीवनमा जीवनसाथीको साथ मिलिरहन्छ ।
शास्त्रको अनुसार यदि हत्केलामा जुन व्यक्तिका हृदय रेखामा कुनैपनि प्रकारको दोष हुँदैन त्यस्ता व्यक्तिका पत्नी उनीहरुसँग धेरै खुशी रहन्छन् ।
हामी अचानक हुनेवाला कुनै परिवर्तनको कुरा गरिरहेका छैनौ । तर यदि पुरुषको दुवै हातको औलामा भिन्नता छ भने यस्ता व्यक्तिका पत्नी वा हुनेवाला पत्नीको लागि अशुभ मानिन्छ । यो अशुभको संकेत हो ।
जुन मानिसको हात सामान्यभन्दा बढी र अत्याधिक कडा हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिको पत्नीसँग कुनै विशेष सुख मिल्दैन । तर उनीहरुको हातमा गुरु पर्वत चाहिनभन्दा अग्लो छ भने त्यस्ता व्यक्तिको पत्नीका लागि अशुभ मानिन्छ ।
जुन पुरुषको हातको औला र चौडा छ यस्ता व्यक्तिलाई पत्नी सुख मिल्दैन । जीवनमा सधैँ उल्झनमा रहन्छ । घरमा सधैँ अशान्ति हुन्छ ।
माछा मार्न र पौडी खेल्न गएका दुई युवा नदीले बगाउँदा बेपत्ता
दोलखा । दोलखाको तामाकोशी नदीमा माछा मार्न र पौडी खेल्न गएका दुई युवा नदीले बगाउँदा बेपत्ता भएका छन् । दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका–१ पवटी निवासी ३६ वर्षीय दीपक भुजेल आइतबार चैतेघाटस्थित तामाकोशी नदीमा माछ
चीनको कारण विश्वले कोरोना भाइरसको प्रकोप झेलिरहेको छ : अमेरिका
एजेन्सी । अमेरिकाले पुनः एकपटक चीनलाई कोरोना भाइरसको महामारीको जिम्मेवार ठहराएको छ । यो खतरनाक भाइरसका कारण अमेरिकामा हालसम्म ९९ हजार भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ भने १६ लाख भन्दा बढी संक्रमित छन् ।
स्पेनमा कोरोना भाइरसको कहर, यस्तो छ पछिल्लो अपडेट
एजेन्सी । विश्वमा कोरोना भाइरसले त्रास फैलाइरहेको छ । चीनको हुवेई प्रान्तस्थित वुहान शहरबाट फैलिन सुरु गरेको यस भाइरसका कारण लाखौं मानिसले अकालमै ज्यान गुमाएका छन् ।
पर्याप्त समय नसुतेमा के हुन्छ ?
एजेन्सी । एक अध्ययनका अनुसार, निद्राको सिधा सम्बन्ध हाम्रो इम्यून सिस्टमसँग हुन्छ । नेशनल हेल्थ एन्ड न्यूट्रीशन एक्जामिनेशन द्वारा गरिएको एक सर्वेमा, इम्यून सिस्टमको सक्रियता तपाईँ कति घण्टा सुत्नु हुन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ ।
यसकारण फ्रिजमा राखेको अण्डा खानुहुँदैन !
कोरोना सर्न नदिन यसरी गरौं मोबाइलको सफाई